I-AMUURA Apartment- 1 eKrakow am See
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguClaire, Paulina & Carlotta
Le ndlu iyinxalenye yesakhiwo senkonzo esasineminyaka eli-150 ubudala esasiseAlt Sammit Castle. Ibekwe embindini welali ezolileyo kwaye ngaphakathi komgama wokuhamba wechibi elihle lokuhlambela iDerliner.
Unathi uya kuziva ngathi ngexesha likamakhulu wakho phakathi kweendonga zodongwe ezizityabekayo, izinto zakudala kunye nezitovu ezifakwe iithayile.
Ilungele ukucima ngokwenene. Nodwa njengesibini okanye njengentsapho.
Ngaphandle kwengxolo yesitalato phakathi kwendalo.
Indlu yonke, kuquka ibhafu kunye nesitovu sasekhitshini, ifudunyezwa ngamaplanga.
Ngokuhamba kwexesha siya kongeza iinkcukacha ezininzi ngakumbi kwaye isitiya ngakumbi siya kuhlala sigxile kuyo. Apha, kwakhona, njengaseSri Lanka, ihektare enye yomhlaba yeyethu. Igadi eyimodeli esekelwe kwimigaqo ye-permaculture iza kuphinda idalwe kwakhona. Nangona kunjalo, ugqaliselo apha lungaphezulu kwiindidi zakudala zeziqhamo (ngokokwazi kwethu, isinamoni ayikakhuli eMecklenburg Western Pomerania ...;))
Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela ngamagumbi ahlukeneyo.
Ixhotyiswe ngeyona nto ibalulekileyo. Umatshini wokuhlamba kunye nesomisi seenwele ziyafumaneka.
Ukongeza kwigumbi lokulala elikhulu, elinebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini, abantu abadala ababini banokulala kwibhedi yokutsala kwigumbi lokulala elincinci. Kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi eyongezelelweyo enye enokuthi isetyenziswe njengesofa emini.
Lilonke, ubuncinci abantu abadala aba-5 banokuhlala kwindawo yethu entle yeeholide.
Ilungele ukucima ngokwenene. Ikwalungele iintsapho kuba ilali inendawo ekhuselekileyo kwaye unokukhulula umphunga kwigadi enkulu, entle.
Indawo i-Alt Sammit ilungile njengendawo efileyo - ifanelekile kwi-detox yokwenyani;)!
Kukho ukuhamba okumangalisayo kwaye, ngaphezu kwakho konke, iindlela zomkhala! Mhlawumbi umntu angathanda ukuthatha izifundo zokukhwela? Isikolo sokukhwela kunye nesitudi silapha elalini.
Ukuba ufuna ukuziphatha ngesidlo sothando esigqibeleleyo sesibini, kufuneka ngokuqinisekileyo wenze ujiko ukuya "Ndiyazi indlu echibini" kunye neenkwenkwezi zaseMichelin, apho noMnu Jauch ube lundwendwe izihlandlo ezininzi.
Iidolophu ezininzi ezindala kwindawo ezifana neGüstrow, Wittstock okanye iPlau am See zinconywa njengohambo losuku. Uhambo oluya kuLwandle lweBaltic alukho kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Claire, Paulina & Carlotta
Sisoloko sifumaneka, nokuba kuphela nge-WhatsApp, kwi-handover engundoqo kunye nemibuzo emincinci, ummelwane uyakuvuyela ukunceda.
UClaire, Paulina & Carlotta yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Krakow am See